တစ်လတိတိ ဘာအချိုရည်မှ မသောက်ပဲ ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေးအတွက် Challenge ခေါ်လိုက်တဲ့ ယွန်းယွန်း – Suehninsi
မင်းသမီးချောလေး ယွန်းယွန်းကတော့ Covid–19 ရောဂါကပ်ဘေးကြီးကြောင့် အိမ်မှာနေရင်း ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေးအတွက် တစ်လတိတိ ဘာအချိုရည်မှမသောက်တဲ့ Challenge ကို “အခုတလော အိမ်မှာနေရင်း အစားစားတိုင်း cold drink တစ်ခုခုအမြဲသောက်ဖြစ်နေတယ် အခုလိုသိပ်လဲမလှုပ်ရှားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ မကောင်းတဲ့အကျင့်ကြီးတစ်ခုလုပ်မိနေသလို ခံစားရတယ်
အဲ့ဒါကြောင့် ဒီနေ့ကစပြီး တစ်လတိတိ ဘာအချိုရည်မှမသောက်ပဲ ရေနဲ့ green tea ပဲသောက်တော့မယ်! Yoon တော့လုပ်နိုင်မယ်ထင်တယ်.. အထဲက kidney လေးတွေကို အနားပေးချင်လို့.. ဒီ challenge လေးတူတူလုပ်ချင်တဲ့သူရှိရင်လဲ welcome နော် ဒီပို့စ်အောက်မှာ daily count လုပ်ပြီး motivate လုပ်ကြမယ်” လို့သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ယွန်းယွန်းကတော့
ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေးအတွက် တစ်လတိတိ ဘာအချိုရည်မှမသောက်တဲ့ Challengeကို သူကိုယ်တိုင် လုပ်ရင်း ပရိသတ်တွေကိုလည်း Chllenge လုပ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ယွန်းယွန်းဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက ကလေးသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်အထိကို
အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်နေရင်းအောင်မြင်မှုတွေအပြည့်အဝရရှိထားပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်မလေးဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးချောယွန်းယွန်းကတော့ Covid–19 ရောဂါကပ်ဘေးကြီးကြောင့် အိမ်မှာနေရင်း ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေးအတွက် တစ်လတိတိ ဘာအချိုရည်မှမသောက်တဲ့ Challenge လုပ်ပါမယ်တဲ့။ပရိသတ်ကြီးကိုလည်း ပါဝင် Challenge လုပ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ထားပါသေးတယ်နော်။
မငျးသမီးခြောလေး ယှနျးယှနျးကတော့ Covid–19 ရောဂါကပျဘေးကွီးကွောငျ့ အိမျမှာနရေငျး ကြောကျကပျကနျြးမာရေးအတှကျ တဈလတိတိ ဘာအခြိုရညျမှမသောကျတဲ့ Challenge ကို “အခုတလော အိမျမှာနရေငျး အစားစားတိုငျး cold drink တဈခုခုအမွဲသောကျဖွဈနတေယျ အခုလိုသိပျလဲမလှုပျရှားဖွဈတဲ့အခြိနျမှာ မကောငျးတဲ့အကငျြ့ကွီးတဈခုလုပျမိနသေလို ခံစားရတယျ
အဲ့ဒါကွောငျ့ ဒီနကေ့စပွီး တဈလတိတိ ဘာအခြိုရညျမှမသောကျပဲ ရနေဲ့ green tea ပဲသောကျတော့မယျ! Yoon တော့လုပျနိုငျမယျထငျတယျ.. အထဲက kidney လေးတှကေို အနားပေးခငျြလို့.. ဒီ challenge လေးတူတူလုပျခငျြတဲ့သူရှိရငျလဲ welcome နျော ဒီပို့ဈအောကျမှာ daily count လုပျပွီး motivate လုပျကွမယျ” လို့သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။ယှနျးယှနျးကတော့
ကြောကျကပျကနျြးမာရေးအတှကျ တဈလတိတိ ဘာအခြိုရညျမှမသောကျတဲ့ Challengeကို သူကိုယျတိုငျ လုပျရငျး ပရိသတျတှကေိုလညျး Chllenge လုပျဖို့ ဖိတျချေါထားပါတယျ။ယှနျးယှနျးဟာ ငယျစဉျကတညျးက ကလေးသရုပျဆောငျတဈယောကျအနနေဲ့ အနုပညာအလုပျတှကေို လုပျကိုငျနခေဲ့တာဖွဈပွီး လကျရှိအခြိနျအထိကို
အနုပညာအလုပျတှလေုပျကိုငျနရေငျးအောငျမွငျမှုတှအေပွညျ့အဝရရှိထားပါတယျ။ ပရိသတျကွီးရေ ပရိသတျတှရေဲ့အခဈြတျောမလေးဖွဈတဲ့ မငျးသမီးခြောယှနျးယှနျးကတော့ Covid–19 ရောဂါကပျဘေးကွီးကွောငျ့ အိမျမှာနရေငျး ကြောကျကပျကနျြးမာရေးအတှကျ တဈလတိတိ ဘာအခြိုရညျမှမသောကျတဲ့ Challenge လုပျပါမယျတဲ့။ပရိသတျကွီးကိုလညျး ပါဝငျ Challenge လုပျဖို့ ဖိတျချေါထားပါသေးတယျနျော။
Source : Yoon Yoon’s Facebook | Reference & Credit : Cele Gabar
ချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းတဲ့ (၆)ရက်သားသမီးလေးကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်း ချစ်မဝဖြစ်နေတဲ့ အာဇာနည်
အကယ်ဒမီများရှင်ဖြစ်သော်လည်း သာမန်လူတွေလို လမ်းဘေးစာ ကြိုက်ကြောင်း ပြသခဲ့တဲ့ ဖွေးဖွေး